ကေဇီ နဲ့ ဘီယာဘဲ တရားဝင်ဖြစ်သွားခြင်းး – Drunken Duck | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ကေဇီ နဲ့ ဘီယာဘဲ တရားဝင်ဖြစ်သွားခြင်းး – Drunken Duck	28
Posted by ဇီဇီ on Sep 30, 2015 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.., Members, Moderator, Society & Lifestyle | 28 comments
ရွာထိန်း လူနည်းတုန်း ကိုယ် ကြွားချင်တာလေး လာထားတာ။
ဂဂ စီစဉ်တဲ့ Food Magazine မှာလေ
ဝါသနာရှင် ချက်ပြုတ်နည်းမှာ သများ ပါတယ်။
အာ့ဒါ သများလို့ လာပြောတာ။
ရန်သူက နည်းတယ်ဆိုတော့ ချောင်းရိုက်မှာ မကြောက် ဘာမကြောက် လာကြွားတာ အဟေးဟေးဟေးးး
၁) ဘဲ – တစ်ကောင်
၂) ရှောက်ကောမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
၃) ပါကောမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
၄) ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်
၅) ပဲငံပြာရည် အကြည် – လက်ဖက် ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်း
၆) ပဲငံပြာရည် အနောက် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
၇) ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
၈) တရုတ်မဆာလာမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
၉) ဘီယာ – ၂ ဗူး
၁၀) ဂျင်း – လက် တစ်ဆစ် ၃ တက်
၁၁) ကြက်သွန်ဖြူ – တစ်လုံး (သို့) ၁၀ မွှာ
၁၂) ကြက်သွန်နီ – ၃ လုံး
၁၃) နာနတ်ပွင့် – ၅ ပွင့်
၁) ဘဲနဲ့ ဘီယာကလွဲပြီးကျန်တဲ့ အမှုန့်တွေ ပဲငံပြာရည် တွေကိုပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ နှံ့အောင် ရောထားပါ။
၂) ဂျင်း ၂ တက် နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကိုထောင်းပြီးအဲဒီပန်းကန်လုံးထဲကိုအရည်ညှစ်ထည့် ပါ။
၃) ဘဲကိုခေါင်းနဲ့ ခြေထောက်ဖြုတ်ပြီး ရောမွှေထားတဲ့ ပါဝင် အမှုန့်များနဲ့ တစ်ကောင်လုံးကို နှံ့အောင်နယ်ပြီး နှပ်ထားပါ။
၄) ရိုက်(စ) ကွတ်ကာ (သို့) ပေါင်းအိုးထဲကိုဘဲကိုထည့်ပါ။
၆) ဂျင်းလက်တစ်ဆစ်ကိုပါးပါးလှီးထည့်ပါ။ နာနတ်ပွင့်ကိုထည့်ပါ။ ကြက်သွန်နီကိုအခွံသင်ပြီးစဉ်ထည့်ပါ။
၇) ပြီးလျှင် ပေါင်းအိုးခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးတည်ထားပါ။
၈) ခလုတ်တက်လျှင် အိုးထဲကထုတ်ခါ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။
၉) ကိုက်လန် အညွန့် တို့ အာလူးတို့ထည့်ခြင်းဖြင့် အပေါ့အငံထိမ်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
၁၀) အချိုးကိုသင့်တော်သလို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ဂဂ တောင်းကတည်းက ဘာချက်ရမှန်းမသိဘူးလေ။
ကိုယ်ချက်တတ်တာ လည်း များများစားစား သိပ်မရှိ။
အမယ် စဉ်းစားတာက ဘာချက်ရမတုန်းမဟုတ်ဘူးး
ဘာဝတ်ရမတုန်း စဉ်းစားတာ။ .
ခုပြီး ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ မွေးနေ့မှာ ရုံးက လူတွေကို ထမင်းကျွေးတော့ ဘဲ ကောင်လုံးလေး ချက်မှပါလို့ တွေးပြီး
(တရုတ်တွေက ဘဲ ကြိုက်တာနဲ့ ကေဇီ က ဘဲ ပဲ ကျွမ်းးးတာနဲ့ အဟွတ်) .
ခါတိုင်းက ခုတ်ပြီးသား ဝယ်ချက်တာလေ။
ဒီ တစ်ခါတော့ ကောင်လုံး ချက်မှရမယ်။ လူများတယ်လေ။
ကောင်လုံး ချက်မဲ့ တူတူ မထူးဘူးး
မဂ္ဂဇင်း အတွက် ဓာတ်ပုံပါ ရိုက်မယ်စဉ်းစားမိတာ။
အာ့နဲ့ အဲဒီမနက် ဘဲ တည်ထားတုန်း ရေချိုး အလှပြင် ..
ဘာလေး နဲ့ ဝတ်ဝတ် လိုက်အောင် အေပရွန်ကို ရောင်စုံအဆင် ၊ နားဆွဲကို ဆင်တူတွေ ဝယ်ထားခါမှ ဝတ်ချင်တဲ့ အရောင် ရွေးမရပဲ ကြာနေတာ..
အာ့နဲ့ ကပ်သွားလို့ အရေခွံကွာတဲ့ နေရာတွေ ကိုက်လန်ညွန့်နဲ့ ဖုံးထားရတယ်။
ခုတ်တုန်းကလည်း ခေါင်း ရော လည်ချောင်းရော ခုတ်ခိုင်းတာ၊ ဆိုင်က တရုတ်ရယ် ခေါင်းလေးပဲ ခုတ်ပေးလိုက်တယ်လေ။
သများ လှ ပြီးရော မဟုတ်လားး
ဘဲ ချောချောမရတာတော့ ကံ ပေါ့။
Ma Ei says: ဝေးးးးးးးးးးးးး
တို့ နံပါတ် ၁ ရပြီ….
ဆွိပုံလေး လှတယ်…. <3
ဘဲတော့ မသိ စားမှမစားရတာကိုး…..
ဇီဇီခင်ဇော် says: အီတယ် မွအိ။
အသုပ် အချဉ် တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွဲစားမှ ကောင်းတာ။
တောင်ပေါ်သား says: မမချွိ ၃၄ နှစ်ဆိုတာ ယုံဘူး ၊
အန်ဒါ သာတိလို့ မှန်းထားတာ ၊
ဒါနဲ့ အဲဒီဘဲလေး မြည်းချင် တာ ၊ ဟိုက်ကလပ်စ်နဲ့ ၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခုဆို ၃၅ ထဲမှာ။ ဟိ။
ကိုဂျီးညိုး ဘီယာဘဲ ကို ထပ်မြည်းချင်သေးတာလားး
ဘဲ စားပြီး ကို ယစ်တစ်တစ်ဖြစ်နေရတာ။
Courage says: အဟတ်… ဘဲထက် ဘီယာဆိုတာမြင်တော့ ပိုစားချင်သွားသလိုပဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့လို့ မျှားရတာပဲ။
Mike says: .၂) ရှောက်ကောမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
.၃) ပါကောမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း
.ချက်စားကျိမို့ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့တွေက တရုတ်တန်းမှာ ရတယ် မိုက်မိုက်။
ဒါမှ မဟုတ်လည်း Five Spice အမှုန့်ရှိလားလို့ မေးဝယ်ရင် ရောပြီးသားရတယ်။
Spoon is tea spoon. လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဆိုတာ လဘက်ရည်ဆိုင်မှာလဘက်ရည်ခွက်ထဲထည့်ပေးတတ်တဲ့ဇွန်းအသေး
@QUIL@ says: ရှာကော ပါကောရော
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာနတ်ပွင့်ရော ပါတယ်။
တနားလို့ သစ်ကြမ်းပိုးတော့ မထည့်လိုက်တော့ပါဘူးးး
အာ့ကြောင့် ကြက်သွန်နီ ထည့်ပြီး အနံ့ ပြန်သတ်ထားတယ်ရော။
Mr. Pocket says: ဒါဆို ဘဲသားစားရင်း မူးသွားမယ်ထင်တယ်ဗျ… ဘီယာတောင်လိုမယ်မထင်မိဘူးဗျ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: လိုတော့ဘူးးးး
မူးတာမှ သွေးကျဆေးလေး ဆောင်ထားရအောင် မူးတတ်တာ။
အောင် မိုးသူ says: ဘီယာဘူးနဲ့ ဘဲကင်တာတို့ ကြက်ကင်တာတို့ လည်း ကြည့်ချင်သေးတယ် နယူးရီးယားမှာ သူငယ်ချင်းတွေကို လုပ်ကျွေးမလို့။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲလာတော့မစမ်းရဲသေးဘူးး
လုံမလေးမွန်မွန် says: စားချင်လိုက်တာ… ဒါမယ့် ဘဲစားပြီးရင် အကြောတွေတက် အဆစ်တွေကိုက် မို့ မစားရဲဝူး..
ဘဲ နဲ့ မတည့်တဲ့သဘောပဲတော့၊
aye.kk says: ဘဲကတော့နှစ်သက်တယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: တီအေးး က ဘီယာရှောင် ရင်တော့
ရိုးးရိုးးရေနဲ့ ကြာကြာချက်တာ ကောင်းးမယ်ထင်တယ်
မြစပဲရိုး says: Many Congratulations ပါ ဆောင်းပါးရှင် ဇီကလေး နဲ့ စီစဉ်သူ ဂဂ ရေ။
အတော်လေး အဆင့်မြင့် တဲ့ presentation အတွက် တကယ်ဘဲ ချီးကျူးပါတယ်။
စီစဉ်သူ လဲ ပိုပိုပြီး အောင်မြင်ဦးမှာပါ။
ပါဝင်သူလဲ ပိုပိုပြီး စားနိုင်ဦးမှာပါ။ :-))
ဘဲ ကို မပေါင်းခင် ဘီယာ အရင် အဝ တိုက်ခဲ့တာလား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျေးးကျေးးပါ အရီးးရေ
ကျနော်မောင်လေးး က မျက်နှဖုံးးတင်မို့ပါ ကြံစည်ခဲ့တာတဲ့..
ဘာဂါ ၂ လုံးးနဲ့ ကာဗာမှာတော့ မပါရဲပါဘူးးး
ဘဲ ကို ဘီယာ တိုက်ပါဘူးးး
ဘီယာလိမ်းးပြီးး ပေါင်းးအိုးးထဲ ပေါင်းးတင်ထားးတာ
ကျော်စွာခေါင် says: လှလှပပ ဆွဲဆောင်ရက်သူကြီးရေ….
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပါလာပြီလားငင်??
ဦးကြောင်ကြီး says: တချက်ခုတ် နှာချက်ပြတ် မီနီစကပ်နဲ့ ပြဒါလော့ ဟုတ်ဝူး…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဝဋ်ထားတာဂို မြင်ဘူးရားး
Alinsett @ Maung Thura says: ဘဲဘီယာ ဘီယာဘဲ
ဇီဇီခင်ဇော် says: နောက် ခေါက်လာရင် ချက်ကျွေးအူးမှာ။
Ma Ma says: ဒီကဏ္ဍမှာ မဖြစ်ညစ်ကျယ်နည်း Lazy Cook နဲ့ရော လက်စွမ်းပြလို့ မရဘူးလား။ စီစဉ်သူကို သနားသောအားဖြင့် ကိုယ့်ဘက်ကပဲ အလျှော့ ပေးလိုက်ပါတော့မယ်လေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: မမ။
ဟိ။ မွသဲတောင် မချက်နိုင်သေးလို့။
မွနိုက ကရင် မုန့်ဟင်းခါး ပါပြီးပြီ။